Ukuhlinzekwa Kwabahlinzeki Nezimboni bePowder - Abakhiqizi BaseChina Abasebenza Nge-Powder
Idivayisi yokuhlukanisa yakhiwe nge-pneumatic classifier, isiphepho, umqoqi, isilayidi sokulinganisa, i-control iKhabhinethi nokunye. Ifakwe nge-air inlet yesibili ne-rectical impeller rotor, izinsiza zidluliswa nge-visa roller engezansi ngaphansi kwamandla akhiqizwe okusuka kufaka uhlaka bese zihlanganiswa nomoya wokuqala wokufaka ukusabalalisa izinhlayiya bese zilethwa endaweni yokuhlukanisa. Ngenxa yejubane eliphakeme kakhulu lokujikeleza i-rotor, izinhlayiya zingaphansi komfutho we-centrifugal okhiqizwa yi-classor rotor technical Parlue: Izimpawu: Umthamo wokucubungula uhlobene nosayizi womkhiqizo kanye nomkhiqizo.
Isicelo: Kusetshenziswe kahle kumakhemikhali, amaminerali (ikakhulukazi osetshenziselwa ukufakwa kwemikhiqizo engeyona eye mineral, njenge-calcium carbonate, kaolin quartz, talc, mica, njll.), I-metallurgy, i-abrasive, i-ceramics, i-fire-proof material, imithi, i-pesticides, ukudla, impilo izimpahla, nezimboni ezintsha zezinto zokwakha.
Lo mshini wenzelwe insimu yokwenza ama-quartz embonini yengilazi. Yakhiwa yisigayo, umhlanga (womkhiqizo ongusayizi ohlukile), uhlelo lokubuya kwezinto ezibonakalayo kanye nohlelo lokuqoqa uthuli. Ungathola imikhiqizo ehlukahlukene yakheke i-shun ehlukile ngosayizi wama-60-120 mesh embonini yengilazi. Ubungako bezinto zempuphu ezivela kuqokeleli luthuli bubalelwa kuma-300mesh, ongawasebenzisela elinye ibhizinisi.
HSW uchungechunge micronizer air jet mill, nge isiphepho sehlukanisi, uthuli umqoqi notshwala fan ukwakha uhlelo lokugaya. Umoya ocindezelwe ngemuva kokuba womile ufakwa egumbini lokugaya ngokushesha ngomjovo wama-valves. Ezindaweni ezixhunywayo zesamba esikhulu semifudlana yomoya onomfutho ophakeme, izinsimbi zokudla zididiyelwe, zixutshwe futhi zithutshwe kaninginingi kumaphawundi. Izinto zokugaya ziya egunjini lokuhlukanisa ngokugeleza komoya, ngaphansi kwesimo samandla okuxutshwa. Ngaphansi kwemikhosi enamandla ye-centrifugal yamasondo e-turbo ajikeleza ngesivinini esikhulu, ama-coarse kanye nezinto ezinhle zihlukaniswa. Izinto ezinhle ngokuhambisana nezidingo zesayizi zingena kusihlukanisi sesishingishishi nomqoqi wothuli ngokusebenzisa izinhlobo zamasondo, kuyilapho izinto ezihlanganayo ziwela phansi kwigumbi lokugaya ukuze zigaye njalo.
I-Series HS pneumatic mill iyithuluzi elisebenzisa isivinini somoya ophakeme kuya ezintweni ezinhle ezomile.
Uchungechunge lwe-HPD ye-HPD ye-Pneumatic
Izinsimbi zilethwa egumbini elichobozekayo ngomoya onomfutho ngejetti yokuphakelwa kwezinto. Umoya ocindezelwe usabalalisa kumajeythi ambalwa omoya ngendlela efanayo ukukhipha umoya we-transonic air wamanje, owakhela u-eddy ogeleza egunjini lokugaya ukuphoqa izinhlayiya ezisendalini ukuthi zihlangane futhi zithintithe.
Izisetshenziswa zohlobo olusha lwe-grinder. Ine-disc esebenzayo ne-static disc. Izinto ezibonakalayo zigayiwe ngomthelela, ukuxabana nokusika kwamandla ku-static disc ngejubane eliphezulu lokujikeleza le-disk ashukumisayo. Ngaphansi kwengcindezi engemihle, i-powder efanelekayo ingena kusigaba sokuhlukanisa futhi iqoqwa ngumqoqeshi ngenkathi izinto ezihlanganayo zibuyela ukugaya eminye.
I-Ball Mill ne-Horizontal Classifier Production Line
Yonke inqubo yobuchwepheshe iqinisekisa ukuthi ukuphuma kothuli kungaphansi kuka-40 mg / m3 no-20 mg / m3 ngemuva kokukhiqizwa, ngokwamukela inhlanganisela yomqokeleli wothuli, uhlelo lwenhlaka lokushiswa kanye nohlelo lokudlulisa i-pneumatic, ukulawulwa okuqinile kwawo wonke amaphuzu okuhlushwa uthuli , kanye nokusetshenziswa kwekhwalithi ephezulu yokuhlunga. Okokusebenza kungavimba ukuvuvukala kothuli futhi kwenze inqubo yonke yezobuchwepheshe ibe yimbi futhi ihlanzekile.
Izinto ezithambile: i-calcite, imabula, i-limestone, i-barite, i-jypsum, i-slag njll.
Izinto eziqinile: i-quartz, i-felspa, i-carborundum, i-corundum, usimende omuhle njll.
Umgomo wokusebenza: Izinto ezisetshenziswayo zithonywe imvamisa ephezulu kakhulu egumbini lokugaya. Amandla athinta inhliziyo anikezwa nge-milling matrix (ibhola, induku, ukwakheka, njll), futhi izinto zizogaywa ngaphansi kwengxabano, ukushayisana, ukugunda kanye namanye amandla.